၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXVI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXVI
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXVI
၊ဖြေ ၊မြစ်ဆုံဆက်လုပ်ရင် ၊မြစ် မဆုံးရပါ
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths
၊အမြင့်တခုကနေ၊ရေလွှတ်ချရင်း Turbine၊စက်ကတအားလည်တော့လျှပ်စစ်အား (“၊ရွှေဖြူ”)ကို”အပိုဆု”အဖြစ်ရလာတယ်၊
မြစ်​ဆုံကိုပိတ်​ပီးလျှက်​စစ်​ ၉ဝ ကိုတယုတ်​ယူမယ်​
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXVIII အမှတ်၃၈ကိုညွှန်း
မြစ်ဆုံလုပ်ရင် မြန်မာပြည်ထက်ပိုင်းခွဲသလို့ဖစ်သွားမှာပေါ့ စဉ်းစား
ကြည့်တာပါမန်မာပြည် ရေမစီး တော့ဘူးပျက်စီးတော့မယ်
မြစ်ဆုံ ရေကာသာ ဆောက်ရင် မြန်မာ့ နိုင်ငံကြီး ပြက်စီး မာတော့ တေ့ချာသယ် ပြည်သူတွေ့ ဒုတ်ခ ရောက်ပီး ငရဲ တိုက်ထဲ ဝင်ရမလို့ ဖြစ်ကြမယ် ပြည်သူတွေ့. နိုင်ငံမဲ့ ကြမယ် အတေ့အချာဘဲ
၊ဖြေ၊ရှေ့ဆောင်းပါး# ၃၁ နဲ့၃၅၊ကိုကြည့်ပါ၊
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LIX – #၅၉
၊ဟောင်ကောင်မကာအိုရပ်တည်ရာပုလဲမြစ်အတွက်ဆောင်းပါး# ၃၂ မှာပါ၊
၊ကျန်Song Hua, Huai, Hai, Li ၊မြစ်တွေ အတွက်ဆောင်းပါး# ၃၃၊၃၄ မှာပါ
၊ ကြိုက်သူတွေက မကြိုက်သူတို့ရဲ့တစ်ဆယ်ဆရှိတယ်)
၊ဟွန်ဒါHonda ၊၄၃၅သန်း$တန်ကားစက်ရုံတရုံကိုတရုပ်ပြည်မှာထပ်ရင်းနှီး ၊တည်ထောင်
Optical Fibre ၊ဝိုင်ယာချည်မျဉ်ထုတ်စက်ရုံ
The speed of fiber drawing has reached 3,000 meters per minute, up 38.9 percent compared with 2012, when the company launched its first advanced manufacturing program. It is one of the fastest fiber drawing techniques in the world, said Yan Changkun, vice-president of YOFC.၊အမြန်ခုတ်မောင်းနိုင်အောင်ကွန်ပြူတာတို့လိုအပ်တဲ့အော့တစ်ဖိုင်ဘာOptical Fibre ၊ချည်မျဉ်ထုတ်စက်ရုံ
မြစ်ဆုံ ရေကာတာလော်ဘီ တလုပ်သဘုံကြေးမုံဂျီး အလိုရှိ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းတွေလုပ်ဖြစ်ပြီး.. နောင်အနှစ် ၂ဝကြာချိန်မှာ.. ဦးကြေးမုံရဲ့ ဒီစာတွေကို.. သမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် ကျန်ရစ်စေပါမယ်..။
ခွိ… အဲဒိအချိန်ကျ တလုပ်ပြည် အမေရိကန်လက်အောက် ရောက်နေဖီ။ ဒါနဲ့ ကြေးမုံဂျီးကို အနော့်လက်က အူးခိုင် လုဖို့ချောင်းနှာရား…. လူသက်ပွဲ ဖစ်ဝါးမယ်နော်…